सोलो रिलिजको मौका पायो 'लोफर'ले - NewsPolar NewsPolar
सोलो रिलिजको मौका पायो ‘लोफर’ले
१८ मंसिर २०७०, मंगलवार १०:२४
काठमाडौं, १८ मंसिर –
मंसिर २१ गतेदेखि चलचित्र ‘लोफर’ करिब एक सय पर्दामा सोलो रिलिज हुँदैछ । अर्थात् ‘लोफर’ रिलिज हुने दिनमा कुनै पनि नेपाली चलचित्र रिलिज हुने छैनन् । काठमाडौंमा गोपाल कायस्थ र मोफसलमा छवि सम्मिलित एफडी कम्पनीले ‘लोफर’ प्रदर्शनको जिम्मा लिएको छ । सोलो रिलिजको मौका कसरी मिल्यो ? निर्माता ओझाले सबै फिल्म सम्वद्ध संघ संस्थाको सहयोगले आफ्नो फिल्मलाई सोलो रिलिजको मौका मिलेको प्रतिक्रिया दिए ।
निर्माता ओझाले निर्माण गरेको चलचित्र पहिलो पटक सुविधा सम्पन्न मल्टीप्लेक्स स्टेशनमा प्रदर्शन हुँदैछ । सिङगल स्क्रिनका सफल निर्माता ओझा मल्टीप्लेक्समा पनि सफल होलान् ? मंसिर १८ गते चलचित्र बारे जानकारी गराउन प्रेस सोको आयोजना गर्ने बताउँदै छविले भने- ‘चलचित्र राम्रो बनेको छ । म सफल हुनेमा ढुक्क छु ।’
अन्य फिल्म प्रतिस्पर्धामा उत्रिंदा समेत घाटा नबेहोरेको छविको फिल्मले सोलो रिलिजको पाउँदा कस्तो व्यापार गर्छ ? प्रतिक्षा गर्रौ । आदित्य विक्रम लम्साल निर्देशित ‘लोफर’मा आर्यन सिग्देल, दयाह्याङ राई, रजनी केसी, कमलमणी नेपाल, सुशिलराज पाण्डे लगायतको अभिनय रहेको छ ।